केपी ओलीको बद्नाम गर्न खोजिएको थियो, प्रतिकार होइन सम्झाएका हौँः बद्रीप्रसाद न्यौपाने - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ २३ गते १०:५४
बद्रीप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
मधेस केन्द्रित दलहरूले सिङ्गो तराईलाई ‘एक मधेस एक प्रदेश’ नारासहित आन्दोलन चर्काइ रहेका बेला जन्मिएको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल तत्कालीन नेकपा (एमाले)मा समायोजन भएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडि एमाले र चुरेभावर पार्टीबीच काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य कार्यक्रम गरेर समायोजन गरिएको थियो । कार्यक्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेले पार्टी समायोजन भएको घोषणा गरेका थिए । ओलीप्रति विश्वास गर्दै चुरेभावर पार्टी विनासर्त समायोजन भएको न्यौपाने बताउँछन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन चुरेभावर पार्टीको विगतका विषयमा बद्रीप्रसाद न्यौपानेसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानी :
चुरेभावर पार्टी कता गयो ? एमालेमा मिसाउनु भयो है ?
२०७४ असोज २८ गते चुरेभावर पार्टीलाई तत्कालीन एमालेसँग पार्टी समायोजन गरिएको हो । अहिले हामी नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा छौँ ।
तपाईहरूले चुरेभावर पार्टीलाई एमालेमा बिलय गराउनु भयो भनेर आरोप लागेको छ नि ?
यो विषयलाई यसरी बुझौँ । एमालेमा पार्टीलाई समायोजन गरिएको हो । हामी समय सापेक्षअनुसार चलेका हौँ ।
एमाले-माओवादी मिलेका छन् । नयाँ पार्टी बनेको छ । तपाईहरूको पार्टीले भाग पायो कि पाएन ?
अशं र भागबण्डाभन्दा पनि म(अध्यक्ष)लाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ । तत्कालीन चुरेभावर पार्टीका धेरै साथीहरूलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन । जिल्ला, प्रदेश हुँदै विभागहरूका साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा समायोजन गर्नेबारेमा कुराकानी अगाडि बढेको छ । साथीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीज्यूसँग कुरा राखेको छु । अध्यक्षज्यूले सबैलाई मिलाउँछु भन्नुभएको छ । आश्वासन दिनुभएको छ । अब तत्कालीन चुरेभावर पार्टीका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मेरोभन्दा पनि अध्यक्षज्यूको हो । हामी उहाँका सारथी हौँ ।
तपाईहरूको पार्टीलाई एकजना मात्रै केन्द्रीय सदस्य किन दिइएको होला ?
हामी कुनै पनि सर्त राखेर पार्टी समायोजन गरेका होइनौँ । राष्ट्रियताका मुद्दामा कुरा मिलेपछि तत्कालीन एमालेसँग समायोजन गरिएको हो । तत्कालीन चुरेभावर पार्टी र एमालेको राष्ट्रिय मुद्दामा कुरा मिल्यो त्यसपछि एजेण्डाका आधारमा समायोजन भएको हो । चुनावमा सँगै जाने भनेर समायोजन गर्‍यौँ । हामीले सर्त राखेर यति सदस्य, यो पद, त्यो पद भनेर कुनै पनि कुरा राखेका होइनौँ । निस्वार्थ भावनाले तत्कालीन एमालेसँग कुरा गरिएको थियो । तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीज्यूले हामी तपाईहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्छौं भन्नुभएको थियो ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा उहाँलाई केही प्राविधिक कुरामा अफठ्यारो परेको हुन सक्छ । म केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनीत भएको छु । अरु साथीहरूको असन्तुष्टि भएपनि त्यसलाई कसरी मिलाएर जाने भन्नेबारेमा पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गरेको छु ।
तपाईले राष्ट्रियताको कुरा मिलेको भन्नुभयो । त्यस बेला एमालेमा राष्ट्रियताको के कुरा देख्नुभयो ?
हामीले तराईको आन्दोलनका बेला पुलको काम गरेका थियौँ । हिमाल, पहाड र तपाईमा सबै नेपालीहरूको अस्तित्वका लागि लडेँका थियौँ । ०६३/६४को तराई आन्दोलनमा चुरेभावर पार्टीको आफ्नै किसिमको पहिचान थियो । र, पछि ०७२ साल नाकाबन्दी भएर जुन किसिमको तराईमा फेरि बितण्डा मच्चाउने कुरा भएको थियो त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भारतले गरेको नाकाबन्दी र राष्ट्रियताको मुद्दाका विषयमा अडान लिएर बस्नुभयो । त्यो कुराले हामीलाई छोएको थियो । आलीज्यूबाट जसरी नेपाललाई एकतावद्ध बनाएर राख्ने र ‘एक मधेस प्रदेश’को जसरी विरोध भएको थियो त्यसलाई चुरेभावर पार्टीको समर्थन थियो । यी सबै विषयमा ओलीज्यूको कार्यशैलीबाट हामी प्रभावित भयौँ । र, हाम्रो विचारसँग मेल खायो । उहाँले लिनुभएको अडानले चुरेभावर पार्टीलाई कहिँ न कहिँ छोएको थियो ।
चुरेभावर पार्टीको आफ्नै ब्राण्ड थियो, आफ्नै पहिचान थियो, यस्तो अवस्थामा पार्टी समायोजन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्‍यो ?
निर्वाचन आयोगले पनि ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड लागू गरेको थियो । वाम गठबन्धन पनि बनेको थियो । हाम्रो पार्टीसँग मिल्ने को पार्टी छ भनेर बहस र छलफल चलिरहेको थियो । चुनावमा जाँदा हामी आउन सक्थ्यौँ वा सक्दैन थियौँ त्यो आफ्नो कुरा थियो । थ्रेस होल्डका कारण हामीलाई कुनै न कुनै पार्टीसँग मिलेर वा एकतावद्ध हुनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारण हाम्रा एजेण्डासँग मिल्ने पार्टीसँग कुरा अगाडि बढाएका हौँ । तत्कालीन एमालेसँग हाम्रो सामिप्यता देखियो । वार्ता भयो । त्यसपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीज्यूले पार्टी समायोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि हामीले पार्टी समायोजन गरेका हौँ ।
चुरेभावर पार्टीले ०६३/६४ वा ०७२ सालमा राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल र नेपालीको अस्तित्वका विषयमा झण्डै १०–१२ वर्षदेखि मुद्धा उठाएर आएको थियो । राष्ट्रका लागि लड्यौँ । हामीलाई विभिन्न परिस्थितिले गर्दा विचार मिल्ने सबैभन्दा नजिकको पार्टीसँग मिल्नुको विकल्प थिएन । त्यो विकल्प एमाले नै भएको हुनाले समायोजन भएका हो ।
चुरेभावर पार्टीको ब्राण्ड सिध्याउनु भो है ?
ब्राण्ड सिध्याउने भन्ने कुरा कसरी आयो ? जुन बेला आवश्यक्ता थियो त्यति खेर चुरेभावर पार्टीले काम गर्‍यो । ०६४ साल ०७२ सालसम्म चुरेभावर पार्टी ठीक थियो । अहिले समयले फड्को मारेर हिँडी सकेको अवस्थामा अब चुरेभावर भनेर बसिरहनु पनि हुँदैन थियो । जोसँग एजेण्डा मिल्छ त्योसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीभित्र बढेको थियो ।
राष्ट्रिय मुद्धामा नेपाललाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने एमालेको नारा मन परेको थियो । पार्टीलाई मात्रै जोगाएर ब्राण्ड मात्रै राखेर त भएन नि ? जति बेला आवश्यक्ता परेको थियो त्यस बेला हामीले नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्‍यौँ । अहिले त्यसको च्याप्टर क्लोज भएको छ । ठूला पार्टीको ध्रुबीकरण भइरहेका बेला हामीले आफ्नै गीत गाएर बस्नु हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझेर परिवर्तित समयमा सिङ्गो पार्टीलाई सफल रुपमा अवतरण गराएका हौँ ।
नेकपाको संगठनात्मक रुप अब कस्तो हुनु पर्ला ?
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । शीर्ष तहमा परामर्शहरू चलिरहेका छन् । कार्यदलहरू पनि बनेका छन् । अहिले नै यस्तो भन्नुभन्दा पनि कार्यदल र शीर्ष नेताहरूको अन्तिम निर्णयलाई हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तरिकाले नेताहरूलाई भेटेर सुझाव र सल्ला दिएका छौँ । नेकपा स्थापनासँगै जनतामा हौसला र उत्साह छाएको छ । गाउँदेखि माथिल्लो तहसम्म कार्यक्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । संगठनका साथसाथै देशलाई समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
केन्द्रीय नेताहरू जिल्लामा जानुपर्छ कि पर्दैन ?
केन्द्रीय नेतृत्वले तोकेअनुसार काम गर्नुपर्छ । नेतृत्वसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीको संगठन गरिनुपर्छ । पार्टीको निर्देशनलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
तपाई कसरी राजनीतिमा आउनु भएको हो ?
म ०४६ सालमा विद्यार्थीबाट राजनीतिमा आएको हुँ । आरआर क्याम्पसमा पढेको हुँ । त्यस बेला नै म अनेरास्ववियुमा काम गर्थें । ०४९ सालतिर नेकपा (एमाले)को सर्लाही जिल्लाको विशेष कमिटी सदस्य भइसकेको थिएँ । बीचमा राजनीतिक उतार चढाव पनि भयो । शिक्षण पेशा पनि गरेको थिएँ । राजाको सक्रिय शासनका बेला आन्दोलन पनि गरियो । घाइते पनि भइयो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला घाइते भएको थिएँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला सर्लाहीमा म घाइते भएको थिएँ । सर्लाही जिल्लाको पाँचौँ नम्बरको घाइतेमा पर्छु । गृहमन्त्रालयबाट घाइतेको परिचय पत्र कार्ड पनि दिएको छ ।
त्यही बेला अचानक तराईमा आगो बल्न थाल्यो । त्यस बेला मधेसी जनअधिकार फोरम थियो । त्यसपछि हामीले चुरेभावर एकता समाज खोल्यौँ । त्यसमा सचिव भएँ । आन्दोलन भयो । राज्यसँग विभिन्न चरणमा सहमति पनि भयो । त्यही पार्टीको महासचिव भएँ । ०६४ सालमा चुरेभावर पार्टीले सभासद् जितेको थियो । केशव मैनाली सभासद् हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि म सांसद भएँ । सभासद् हुँद महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । ०७० सालको महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँ । सर्लाही २ मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेँ । केही मतले म पराजित भएँ ।
नाकाबन्दीका बेला तपाईहरूले मधेसी मोर्चाको किन प्रतिकार गर्नुभएको हो ?
भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो नाकाबन्दीलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले समर्थन र साथ दिइरहेका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलन एक ठाउँमा सहि थियो होला । तर, उनीहरूले जसरी देश र जनतालाई दुःख दिने गरेर गतिविधि गर्न थाले त्यसपछि बाध्य भएर हामीले उनीहरूको प्रतिकार गरेका हौँ । सडक बन्द गर्न आएका बेला खेदेका हौँ ।
मेरो नेतृत्वमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम भएको हो । सडक बन्द गर्न आएका बेला मधेसी मोर्चाको प्रतिकार गरेर त्यो आन्दोलन तुहाउने काम पनि चुरेभावर पार्टीले गरेको थियो ।
चुरेभावर पार्टीको संगठन कति जिल्लामा थियो ?
२४ जिल्लामा हाम्रो संगठन छ । ती साथीहरूले नेकपामा समायोजनका लागि दवाव दिइरहनु भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीज्यूले पनि समायोजन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । चुरेभावरले राष्ट्रियताको विषयमा के गरेको थियो । इतिहाँसले भन्नेछ ।
तपाईहरूले नाकाबन्दीको किन विरोध गर्नुभयो ? त्यस बेला मधेसी मोर्चा भनेपछि तपाईहरूको किन टाउको दुख्थ्यो ?
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका नाममा सीमापारी गएर आन्दोलन गरेको थियो । आफ्नो देशको आन्दोलन अर्काको देशमा गएर गर्न पाइन्छ ? भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेको हो । नाकाबन्दी गर्ने अधिकार भारतलाई छैन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित नाकाबन्दी लगाएको थियो । मधेसी मोर्चाको प्रतिकार गर्न कोही पनि सडकमा नआएका बेला चुरेभावरले हिम्मत गरेर प्रतिकार गरेको हो ।
मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको मात्रै प्रतिकार गर्नुको कारण के हो ?
उनीहरू राजनीतिक मुद्धा लिएर आएका होलान् भनेर पहिला चुप बसेका थियौँ । सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिन थालेपछि सोँच बाध्य भयौँ । सडक बन्द गर्ने तथा घर जलाउने काम हुन थालेपछि बाध्य भएर चुरेभावर पार्टीले त्यस बेला मधेसी मोर्चाको प्रतिकार गरेको हो । उनीहरूलाई पाठ सिकाएको हो ।
तपाईहरूको त्यो आन्दोलन केपी ओलीले चलाएको भन्ने आरोप थियो नि ?
चुरेभावर पार्टी जन्मिने बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ? त्यस्तो केही पनि होइन । भारतको बुइ चढेर मधेसी मोर्चा हिँड्ने । नाकाबन्दी भारतले गर्ने । त्यो नाकाबन्दीको समर्थनमा सीमामा बसेर नेपालमा आमहड्ताल गर्ने । हामीले त शान्तिपूर्ण जुलुस गरेका थियौँ । उनीहरू आएपछि झडप भयो । हामीले राम्रो काम गर्दा सबै देश भक्त नेपालीहरूले राम्रो भयो भन्नु भयो होला । तर, ओली वा अरु कसैले पठाएर हामी प्रतिकार गर्न गएका होइनौँ ।
जनता र राष्ट्रियताका पक्षमा नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको अराजक आन्दोलनको प्रतिकार भएको हो । धेरै नेपालीहरूले चुरेभावर पार्टीले ठीक गरेको छ भनेका थिए । हामीले मंसिरबाट प्रतिकार गरेका थियौँ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको चार महिनापछि हामीले प्रतिकार गरेका हौँ । ओलीले भनेको भए त भदौ आसोजदेखि नै प्रतिकार हुने थियो नि । उदण्ड काम गरेको हुनाले मधेसी मोर्चाको त्यस बेला हामीले प्रतिकार गरेका हौँ । भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको देशमा मधेसी मोर्चाले उदण्डता देखाएपछि हामीले सम्झाएको मात्रै हो । प्रतिकार गरेको होइन ।